पूर्वयुवराज पारस शाह र रवि लामिछानेबीच रहस्यमय भेटवार्ता – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/पूर्वयुवराज पारस शाह र रवि लामिछानेबीच रहस्यमय भेटवार्ता
पूर्वयुवराज पारस शाह र चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । राजनीतिक उपलब्धी संकटमा परेको भनिएका बेला उनीहरुबीच भेटवार्ता भएको समाचार सार्वजनिक भएको हो।
फागुन ३ गते सोमबार साँघु साप्ताहिकले प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार पूर्वयुवराज परास शाह र रवि लामिछानेबीच करिब १२ दिन अघि पोखराको वैदाम लेकसाइडस्थित एक रेस्टुरेन्टमा भेटवार्ता भएको हो । यद्यपि सो भेटवार्तामा के कुराकानी भएको हो भन्ने साँघुले खुलाएको छैन। उसले यसबारे थाहा हुन नसकेको जनाएको छ।
‘पारस शाहले करिब १२ दिन अगाडि पोखरामा चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेलगायतसँग वार्ता गरेका छन् । पोखराको वैदाम लेकसाइडस्थित एक रेस्टुरेन्टमा भएको उक्त वार्तामा के कुराकानी भए भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन सकेको छैन’, साँघुले लेखेको छ।
सार्वजनिक समाचारअनुसार रवि लामिछानेको समूहले बुक गरेको सो रेस्टुरेन्टको हलमा केही बेरपछि पारस शाहको सुरक्षाकर्मीले मागेका थिए । अलमलमा परेका रेष्टुरेन्टका सञ्चालकले सो हल रवि लामिछानेलाई दिइसकेको भन्दै उपलब्ध गराउन नसक्ने जवाफ दिए । यसबारे साँघुले लेखेको छ, ‘पारसका सुरक्षाकर्मीले रवि लामिछानेसँग नै भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको भनेपछि रेस्टुरेन्ट सञ्चालक पारसको टोलीको सम्भावित त्रासबाट मुक्त भए।’
साँझपख पारस शाह र रवि लामिछाने बिच करिब १ घण्टा वान टू वान वार्ता भएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित भएको छ । रवि लामिछानेले सुरुमा पारस शाहसँग पोखरामा भेट भएको कुरा स्वीकार्न मानेनन् । पछि रेस्टुरेन्टमा भेट भएको हो, तर वान टू वान वार्ता भएको होइन भन्ने रविले दाबी गरेको प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ।
योजनाबद्ध रुपमा भेटेको कुरालाई अस्वीकार गरेका रविले पारससँग भेट हुँदा १०÷१२ जना व्यक्ति सँगै रहेको बताएका छन् । रविले भनेका छन्, ‘पारससँग संयोगवश भेट भएको हो । जो कसैसँग पनि भेट हुनु ठूलो कुरा होइन।’
नातीलाई खुकुरीले छ’पकाएको ठाउँ देखाउदै हजुर आमा- मनछूने भिडियो हेर्नुहोस
चितवनको देवघाटमा अचानक कहाँ बाट आउँन थाले यति धेरै शव ?
राजा ज्ञानेन्द्र शाह पुनः राजगद्दीमा आउने निश्चित भयो ! सहमत हुनेले पूरा पढेर सेयर गर्दै सबै सामु पुर्याउ